दुबई शहर कम्पनीमा पुन: सुरू अपलोड गर्नुहोस् र युएईमा रोजगार खोज्नुहोस्
अपलोड पुनः सुरु गर्नुहोस् - भर्ती गर्नेहरू तपाईंलाई नयाँ जागिरको लागि खोज्दै हुनुहुन्छ!
फेरि पुनः अपलोड गर्नुहोस् पृथ्वीमा सबैभन्दा छिटो बढ्दो शहर!
सामान्यतया दुबई सिटी कम्पनीको लागि तपाइँको RESUME पोस्ट गर्दै सरल छ - दुबई शहरमा तपाइँको CV अपलोड गर्नुहोस् वा हाम्रो व्हाट्सएप समूहमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् र तपाईं दुबै दुबै दुबई जर्नलबाट केही मिनेट टाढा हुनुहुन्छ। लामो समयसम्म हाम्रो सेवामा यो नौकरी खोजकर्ता र दुबईमा भर्तीका लागि 100% गोपनीय छ। हामी तपाईंको व्यक्तिगत गोपनीयताको आदर गर्दछौं - यी बिन्दुहरूले हाम्रो कम्पनीको साथ भविष्यको क्यारियरको लागि उच्च स्तरको गोपनीयताको छनौट गर्दछन्। बीचमा वरिष्ठ कार्यकारीहरूले तपाईलाई हाम्रो नौकरीमा दुबई ब्लगमा युनाइटेड अरब अमीरातमा भेट्टाउछ। रोजगारदाता, भर्ती, र लगानीकर्ता अहिले प्रोफाईल खोज्दै हुनुहुन्छ! न्युनक्सको 82% भन्दा बढी जीभीसीमा आफ्नो काम विज्ञापन बिना सीवी डाटाबेस खोज्नुहोस्। 542,000 कर्मचारी भन्दा माथि हाम्रो कम्पनीसँग दर्ता भएको छ र हामी हरेक दिन बढ्दैछौं। हामी जान्दछ दुबई 2018 मा कामको लागि कसलाई भर्ना हुने छ।
के तपाईँ खोज्न चाहनुहुन्छ? दुबईमा काम
तल हेर्नुहोस् UAE मा RESUME अपलोड गर्नुहोस्
दुबई सिटी कम्पनीसँग सुरु गर्नुहोस्
$4.99* हो, हामी तपाईंको सीवी पोस्ट गर्दछौं!
केवल $ 4.99 को लागि लिङ्कडेन नौकरी शिकार सक्रिय गर्नुहोस्
पुन: सुरु गर्नुहोस् दुबई शहर कम्पनी र हाम्रो टीमले तपाइँको CV मात्र पोष्ट गर्ने छ लिंक्डिनमा एउटा पृष्ठ हामी हाम्रो कम्पनी पृष्ठहरूमा मानिसहरू पोस्ट गर्दा मानिसहरूले पहिले यो देखेका छौं !.
तपाईंको काम खोजीको लागि स्मार्ट वे! + गाईड प्राप्त गर्नुहोस् र दुबई शहर कम्पनीको साथ रोजगार खोजी सक्रिय गर्नुहोस् (दुबईमा विशेष सेवाहरू आरक्षण गर्दै) + लि my्कडिन + थप मद्दतको एक पृष्ठमा युएईमा सबै एचआर प्रबन्धकहरू र निर्देशकहरूलाई मेरो सीवी पठाउनुहोस्।
हामी हाम्रो जागिर खोजी कार्यक्रममा यति विश्वस्त छौं कि हामी जहिले पनि कुनै पनि काम खोज्नेहरूको हेरचाह गरिरहेका छौं! 100% X UM 4.99 को लागी पनि हामी तपाइँको CV को CV पोस्ट पोष्ट गर्दैछौं यदि तपाइँ रोजगार प्राप्त गर्नुहुन्न!
भुक्तानी पूरा भएपछि:
प्रणाली स्वचालित रूपमा तपाइँलाई CV अपलोड गर्न। यो प्रक्रियाले 30 व्यापार दिनहरू लिनको लागि लिन्छ, र यो एक समयको भुक्तानी हो र दुर्भाग्यवश फिर्ती योग्य भुक्तान छैन।
दुबईमा 90 दिन भित्र काम!
$9.99"विशेष Expats को लागी डिजाईन गरीएको
हामीले तपाईंलाई जस्तै हजारौं मानिसहरूलाई सहयोग गर्यौं!
पुन: सुरु गर्नुहोस् दुबई शहर कम्पनीमा हाम्रो मानव संसाधन टीमले तपाइँको रोजगार खोजी प्रक्रियाको सशक्तिकरण गर्दछ र विश्वको पेशेवर दुबईको समुदायलाई तपाइँको CV हेर्नको लागि संलग्न गर्दछ। हाम्रो भर्तीको साथ नजिक काम गर्नुहोस्। हाम्रो टोलीले 500k कार्यकारीहरूसँग तपाइँको केसमा काम गर्दछ र एमिरेट्समा रोजगार खोज्न मद्दत गर्दछ।
हाम्रो फायदा लिनुहोस् विशेष अय्यूब खोज प्रणाली तपाईंको पुन: सुरू अपलोड गरेर। तपाइँ अब काम खोज प्रणाली कोशिस गर्न सक्नुहुनेछ 100% संतुष्टि ग्यारेन्टी! Expats को लागी उत्तम छनौट गर्नुहोस् यदि तपाइँ 90 दिनमा काम प्राप्त गर्नुभएन भने समर्थन प्रदान गरिनेछ!
* दुबई शहर कम्पनी र हाम्रो टीम को साथ 90 दिन काम खोज प्रक्रिया शुरू गर्नुहोस् तपाईंको केसमा भर्तीकर्ताहरूलाई तपाईंको CV भ्रमण गर्नका लागि। 610M + सदस्य पुग्न। तपाईंको सीभी एचआर निर्देशकहरू, भिपीहरूको, सीईओको, वरिष्ठ उपाध्यक्षहरू र दुबईमा वरिष्ठ भर्तीकर्ताहरूलाई दृश्यमान हुनेछ।
हामी निश्चित छौं कि तपाइँ हाम्रो प्रणाली चाहानुहुन्छ! तपाईंको CV HR निर्देशक, VP's, CEO's, वरिष्ठ उपाध्यक्षहरू र दुबईमा वरिष्ठ भर्तीकर्ताहरूमा दृश्यात्मक हुनेछ.
यदि तपाईं कार्यक्रम मार्फत जानुहुन्छ र सोच्नु भएन कि तपाईले कहिल्यै बनाउनु भएको खोजीमा सर्वश्रेष्ठ लगानी हो। त्यसोभए तपाईं सीभि लिस्टिनमा सीवी पोस्ट पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ, कुनै प्रश्न सोधिएन। त्यसैले यो तपाईंलाई बिल्कुल केहि पनि खर्च छैन!
प्रणाली स्वचालित रूपमा तपाइँलाई CV अपलोड गर्न। यो प्रक्रियाले 90 व्यापार दिनहरू लिनको लागि लिन्छ, र यो एक समयको भुक्तानी हो र दुर्भाग्यवश फिर्ती योग्य भुक्तान छैन।
कार्य खोज्दै 60 दिन + पैसा फिर्ता ग्यारेन्टी
दुबईमा रोजगार पाउन 100% प्रणाली
पुन: सुरु गर्नुहोस् 60 दिन को साथ दुबई सिटी कम्पनी को लागि धन फिर्ता गारंटी। हाम्रो भर्तीको साथ नजिक काम गर्नुहोस्। हाम्रो टोलीले लिंक्डिनमा मुख्य पृष्ठमा तपाईंको सीभी पोस्ट गर्दछ, र तपाईंलाई एमिरेट्समा रोजगार पाउन मद्दत गर्दछ।
हाम्रो फायदा लिनुहोस् विशेष अय्यूब खोज प्रणाली तपाईंको पुन: सुरू अपलोड गरेर। तपाइँ अझै पनि उत्पादन प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ 60 दिनको लागि RISK-FREE! 100% फिर्ता यदि तपाई 60 दिनहरूमा काम नगर्नु भयो भने बनाइनेछ!
* 60 दिन सुरुवात दुबई सिटी कम्पनीसँग काम गर्ने प्रक्रिया र हाम्रो टोली पनि पोस्ट गरिनेछ Linkedin मा तपाईंको CV । तपाईंको सीवी मानव संसाधन निर्देशक, वीपी, सीईओ को, वरिष्ठ उपाध्यक्ष र दुबई मा वरिष्ठ भर्ती को लागि दृश्यात्मक हुनेछ।
हामी हाम्रो कम्पनी पृष्ठहरूमा मानिसहरू पोस्ट गर्दा मानिसहरूले पहिले यो देखेका छौं !.
यदि तपाईं कार्यक्रम मार्फत जानुहुन्छ र सोच्नु भएन कि तपाईले कहिल्यै बनाउनु भएको खोजीमा सर्वश्रेष्ठ लगानी हो। त्यसपछि तपाईले 100% फिर्तीलाई स्पेसमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, कुनै प्रश्न सोधिएन। त्यसैले यो तपाईंलाई बिल्कुल केहि पनि खर्च छैन!
हाम्रो टोलीले तपाइँको प्रोफाइललाई हाम्रो 580k भर्तीकर्ताहरू र एचआर अधिकारीहरू मा अपलोड गर्दछ
दुबईमा भर्ती र मानव संसाधनहरू तपाईंको सीवी हेर्नुहोस्!
⭐ तपाईंको पुन: शुरुवात / लिङ्क हाम्रो शीर्ष पृष्ठहरूबाट पहुँचयोग्य हुनेछ!
⭐ भर्ती नेटवर्क (80,000 + व्यवसायी)
⭐ परियोजना प्रबन्धक (24,000 + व्यवसायी)
✔ मेरो अनुप्रयोग "भिसा प्रायोजक कार्यक्रम"
✔ मेरो आवेदन अन्तर्राष्ट्रिय क्यारियरको लागि
✔ मेरो सीवी दुबई भर्ती कम्पनीहरु को जोडें
✔ Linkedin मा प्रत्यक्ष भर्ती र नियोक्ता
यदि तपाइँ 60 दिनमा काम पाउनुहुन्न? तपाईं फिर्ती अनुरोध पठाउन सक्नुहुनेछ:
refund@dubaicitycompany.com यो प्रक्रियाले 3-7 व्यवसाय दिनहरू लिनको लागि लिन्छ, र फिर्ती फिर्ता तपाईंको बैंक कार्डमा जम्मा हुनेछ।
अब: CV अपलोड गर्नुहोस्!
दुबई कम्पनीमा पुन: सुरु गर्नुहोस्
कृपया तपाईंका साथीहरूसँग र साझा गर्नुहोस्!
अमीरातमा पुनः सुरू गर्नुहोस् ठूलो प्रश्न: तपाइँ आफ्नो पुनरुत्थान दुबई सिटी कम्पनीमा किन राख्नुहुन्छ ?. बस किनकी हामी दुबई, संयुक्त अरब अमीरात शहर मा एक अग्रणी कम्पनी हो र हाम्रो सेवा दुबई मा नौकरी को लागि सबै भन्दा राम्रो स्रोत हो। * दुर्भाग्यवश हाम्रो कम्पनीको सेवाको यो भाग प्रयोग गर्न तपाईलाई आफ्नो खाता अपग्रेड गर्न आवश्यक छ।
वास्तवमा, हाम्रो कम्पनीले सक्रिय रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय क्यारियर शिकारीहरूलाई मदत गरिरहेको छ। यस कारणको लागि, तपाईं आफ्नो अद्यावधिक गरिएको CV पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, सँग जोड्नुहोस् मानव संसाधन प्रबन्धक र भर्ती दुबई, जीसीसी र यूरोपमा प्लेसमेंटको लागि। हाम्रो कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रवासीहरूको लागि मार्गदर्शक हात प्रदान गर्दछ। विशेष गरी हाम्रो टोली प्रदान गर्दछ भारतीय नौकरी खोज्नेहरूको लागि मद्दत र पाकिस्तानी रोजगारी खोज्ने। हाम्रो मिशन तपाईंलाई दुबई, संयुक्त अरब अमीरात मा सर्वश्रेष्ठ भर्ती र एचआर प्रबंधकों संग जोडना छ। दुबई सिटी कम्पनी, लामो समयसम्म, को लागि एक प्रमुख विकल्प हो मध्य पूर्वमा जागिर खोज्दै। हामी मान्छेहरूलाई दुबई कम्पनीहरुमा क्यारियर सुरू गर्न मद्दत पुर्याइरहेछौं। हाम्रो मिशन हरेक कैरियर हंटर हो। जस्तो उल्लेख गरिएको छ हामी सामाजिक सञ्जालमा दुबईको एक धेरै लोकप्रिय कम्पनी हो। हरेक क्यारियर खोज्ने को लागी जो कि हाम्रो खोज को खोज मा शामिल हुन चाहान्छन। हाम्रो टोलीले उनीहरूको सहयोग र सहायता प्रदान गर्दछ खाडी नौकरी खोजी। हाम्रो कम्पनीमा पुनः सुरू गर्नुहोस् र परिणामहरू हेर्नुहोस्।
दुबईमा कामको खोजी गर्दै
सबैले कर मुक्त वेतनहरू चाहन्छन्। र यही कारण हो कि धेरै मूल्यहरु दुबई, संयुक्त अरब अमीरात मा जान्छ। जीसीसी बजारमा बढ्दो अवसरों, एक अद्भुत मध्य पूर्वमा क्यारियर। र दायाँ कर्महरूको लागि बढ्दो आवश्यकताको साथ - तर त्यसपछि तपाइँ सही प्याकेजको लागि सही कम्पनीसँग कसरी सही काम पाउनुहुन्छ? उत्तर आफैले सही दावीको रूपमा पोषण गर्दै छ यो इरादा संग, हाम्रो कम्पनीले अपलोड सिर्जना गर्यो पुन: सुरुवात सेक्शन। यस कारणको लागि, तपाईं सजिलै केहि मिनेट भित्र दुबई कम्पनीमा आफ्नो CV थप्न सक्नुहुन्छ। सामान्यतया, तपाईंको CV पोस्ट गर्दै दुबई सिटी कम्पनीमा सरल र सजिलो छ। तपाईंले गर्नु पर्छ सबै काम एक नौकरी आवेदन भरी छ र त्यसपछि निर्देशन पछ्याउनुहोस्। वा बिना विलम्ब पनि तपाईंको CV छिटो सेक्शनमा छोड्नुहोस् र परिणामहरूको लागि पर्खनुहोस्। दुबईको क्यारियर केवल केहि मिनेट पछि तपाईंको सपना जीवन शैली बाट। हामी गोप्यता बारे हाम्रो कभर खोजी र भर्खर दुबई, संयुक्त अरब अमीरातमा भर्ती भएका छौं र हामीसँग निकै बलियो स्क्रीनिंग प्रक्रिया पनि छ। हामी तपाईंको व्यक्तिगत गोपनीयताको आदर गर्छौं। ती परिस्थितिहरूमा, तपाईं केहि पनि हराउनु भएको छैन। तपाईले जो पनि सेवा रोज्नुहुन्छ, हाम्रो टोलीले तपाईंलाई सहयोग गर्नेछ क्यारियर खोज बिन्दुहरू एक्सटेट्सका लागि। दुबई सिटी कम्पनी सबै क्यारियर खोजीकर्ताहरूको खोजी गर्ने क्यारियर व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गर्दै। र हामी सबैलाई सम्झने क्रममा सबै कुराहरु विचार गरौं।
दुबई र अबू धाबी मा 2019 क्यारियर
अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरातको राजधानी हो। र यो जहाँ अर्को रोजगारी बूम हुन्छ। तपाईंको पुन: पुन: सुनिश्चित गर्न भर्खरै राखिएको छ भर्ती कम्पनीहरूको डाटाबेसमा तपाइँले छिटो रोजगारी सुनिश्चित गर्न सक्नुहुनेछ। प्रक्रिया धेरै सरल छ। जब तपाईंको पुन: सुरुवात सजिलै संग डाटाबेस मा भर्तीहरु को लागि उपलब्ध छ, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात र अबू धाबी मा नौकरी को लागि आफ्नो प्रोफाइल मा पहुँच को लागि संयुक्त अरब अमीरात को आसान हो। अहिले हामी बोल्छौं - दुबई कम्पनीका मानव संसाधनका प्रबन्धकहरू सही फिट र दायाँ उम्मेद्वारहरूको खोजीमा व्यस्त छन्। माथि 82% नियोक्ताहरु को बिना सीभी डेटाबेस को खोज को बिना उनको विज्ञापन दुबईमा काम। त्यसैले त्यही टोकन गरेर, तपाईं हाम्रो प्रयोग गरेर उनीहरूको नजिक गर्न सक्नुहुन्छ दुबईमा नौकरी खोज सेवा। 542,000 कर्मचारीहरू भन्दा हाम्रो दुबई कम्पनीसँग दर्ता गरिएको छ। सकारात्मक पक्षमा र हामी हरेक दिन बढ्दैछौं। त्यसैले तपाईंलाई दुबईमा एक नौकरी खोज्नको लागी चिन्ता पर्दैन। उदाहरणका लागि, हाम्रो कम्पनीले भर्ती गर्ने कामलाई थाहा छ। र हामी जान्दछ कि दुबई 2018 मा रोजगार को लागि भर्ती गर्ने को लागी। नबिर्सनुहोस् हाम्रो साझेदार Bayt.com लाई आफ्नो रिज्यूम अपलोड गर्न CV क्यारियर साइट। बेट अग्लो छ नौकरी साइट खाडी र मध्य पूर्वमा। बेल्टको साथ, तपाईं अपलोड पुनःसुरु गर्न सक्नुहुनेछ, प्रोफाईल सिर्जना गर्नुहोस्, दुबईका लागि खोजी गर्नुहोस् रोजगारी र ताजा 2018 जम्मा रिक्तिहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ। Bayt.com जोड्दै कामदारहरू नियोक्ताओं र भर्तीहरु संग संयुक्त अरब अमीरात मा। कम्पनीसँग अद्भुत एक्सटेट सल्लाह छ र नौकरी खोजीमा अर्को कुञ्जी बिन्दु हाम्रो हो दुबई नौकरिहरु ब्लग। यो मनमा, कम्पनीले संयुक्त अरब अमीरातको नौकरी बजार भित्र नयाँ कार्यकारी सङ्कलन गर्न खोज्छ।
दुबईमा हाम्रो भर्ती साथी
हाम्रो साझेदार Bayt.com मध्य पूर्वी र खालमा आजको प्रमुख नौकरी साइट हो। Bayt.com नौकरी पोर्टल, सबै क्यारियर स्तर, उद्योग, र क्षेत्रमा राष्ट्रीयताहरूमा नौकरी खोजकर्ताहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ। उनीहरूको साइटको एक मात्र सीमा भनेको उनीहरूले प्रयोग गर्दैनन् भर्तीको लागि WhatsApp समूहहरू दुबईमा कुनैपनि तरिकाले, हाम्रो पार्टनर हजारौं कम्पनीहरू र दुबईका मानव संसाधन प्रबन्धकहरूसँग काम गर्दछ। वरिष्ठ अधिकारियों को बलियो ध्यान संग। यसैले यदि तपाईं मा काम गर्ने चाहानुहुन्छ भने मध्य पुर्व यसैले साना व्यवसायहरूमा ठूला व्यवसायहरूमा क्यारियरका अवसरहरू खोज्न युग्मित भएको सरकारी संस्थाहरू। नतीजा, हाम्रो कम्पनी दुबई ब्लग मा नौकरी को शिकारीहरु लाई सफलतापूर्वक आकर्षित गर्न र हरेक दिन रोजगारी कैरियर मा Google कैरियर को लागि योग्य पेशेवर र अधिकारीहरु को भर्ती गर्न को लागि मदद। 2000 मा स्थापित, संयुक्त अरब अमीरात मा Bayt.com क्षेत्र मा सबै भन्दा विश्वसनीय र सम्मानित दुबई नौकरी ब्रान्ड मध्ये एक हो। Bayt.com मा मुख्यालय छ दुबई सिटीसंयुक्त अरब अमीरात जहाँ तपाईं आफ्नो पुन: शुरुवात अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ र दुबई शहरमा एक नौकरी खोज्न सक्नुहुन्छ र अबू धाबी, अम्मान, बेरूत, काहिरा, क्यासाब्लांका, दोहा, जेडा, खाबर, कुवैत र रियादमा क्षेत्रीय कार्यालयहरू छन्।
हाम्रो कम्पनीको साथ आफ्नो सीवी पोस्ट गर्दै
तपाइँको CV मा अनलाइन पोस्ट गर्नुहोस् भाग्य 500 कम्पनीहरु दुबई शहरमा यो राम्रो र सजिलो छ! दुबई नौकरिहरु व्हाट्सएप समूहमा सामेल हुनुहोस्। निश्चित रूपमा, सुरू गर्नुहोस् ग्यारेन्टी $ 10 को लागि नौकरी प्लेसमेंट प्रोग्राम? दुबईमा जागिर खोजको संसार परिवर्तन भएको छ। हामी अहिले भित्र भित्र मद्दत गर्दै छौं दुबई व्हाट्सएप समूह तपाइँ नवीनतम संस्करणहरूसँग अद्यावधिक हुनुहुन्छ? दुबई सिटी कम्पनीको व्यावसायिक कार्य सदस्य बनेर तपाईं एक नौकरी प्राप्त गर्न को लागी व्यक्तिगत अवसर सुधार गर्न एक नौकरी आवेदन भर्दै हुनुहुन्छ। र सफलताको लागि साक्षात्कार गाइड। हाम्रो जागिर जडान प्लेसमेंट कार्यक्रम 100% हो। सारमा र तपाईं मध्य पूर्व मा उच्चतम गुणस्तर योग्यता "शीर्ष-निशान" उम्मेदवारहरूको समूहमा सामेल हुनुहुनेछ। तपाईंसँग पनि हाम्रो पूर्ण समर्थन र दुबईमा अद्भुत एक्सटेट्स सल्लाह छ। * सबै आवश्यक क्षेत्रहरू र एक नौकरी अनुप्रयोगका सेक्शनहरू आफैलाई पूर्ण रूपमा पूरा गरिनुपर्दछ किनभने Dubaicitycompany.com मा CV सिर्जना पृष्ठमा संकेत गरिएको छ। थप प्रश्नहरू गैर-बासिन्दाहरू द्वारा भरिएको हुनुपर्छ वीजा जानकारी.
दुबई शहरको लागि अपलोड पुन: सुरू गर्नुहोस् कम्पनी कम्पनीको लागि सफलता छ!